MIUI 11 wuxuu durbaba imanayaa Redmi 4 qaabkiisa xasilloon | Androidsis
MIUI 11 wuxuu durbaba imanayaa Redmi 4 qaabkiisa xasilloon
Haaruun Rivas | | Noticias, Xiaomi
Xiaomi waxay u sii deyneysaa cusbooneysi cusub mid ka mid ah aaladaha ugu hooseeya ee ugu caansan. Tani waa Redmi 4, Terminal shaqeynaya oo hooseeya oo la bilaabay Maajo 2017.
MIUI 11 qaabkeeda xasilloon waa xirmada qalabka cusub ee cusbooneysiinta oo cusbooneysiineysa dhammaan xiriirka taleefanka. Midkani durba wuu ku faafaa adduunka cabir ahaan wuxuuna keenayaa tan hagaajin iyo astaamo cusub.
Tani waxay noqotay wax lala yaabo, maadaama ay jiraan taleefannada casriga ee cusub ee Redmi iyo Xiaomi oo aan weli helin dhammaan faa'iidooyinka MIUI 11.
Waxaan sheegnay in cusbooneysiintu ay ku faafayso adduunka iyo si tartiib tartiib ah, laakiin hadda waxay fadhiisatay Hindiya, waddankii ugu horreeyay ee ay timaaddo iyo halka ay ka soo baxeen warbixinnadii ugu horreeyay ee xaqiijinaya in OTA horayba u jirtay. Shaashadda shaashadda kore waxay muujinayaan wixii la yiri.
Shaashadda la wadaago waxay muujineysaa in cusbooneysiinta cusub ay la socoto nambarka nooca MIUI 11.0.2.0.NAMMIXM. Waxay sidoo kale muujineysaa taas feylka cusbooneysiintu waa 483 MB cabir ahaan. Arrin xiiso leh, wax isbeddel ah kuma keeneyso nooca Android, maaddaama Redmi 4 ay weli maamusho taariikhdii hore ee Android 7.1.2 (Nougat). Intaa waxaa sii dheer, waxay keeneysaa baakadka amniga Android ee Oktoobar 2018 ee Google sii daayay in ka badan sanad ka hor.
Isbeddelka isbeddelka ee ay wadaagaan isticmaaleyaasha qaar ka mid ah golaha MIUI wuxuu muujinayaa in MIUI 11 ay bixiso kontaroolo taabasho oo hagaagsan iyo adeegsi midab leh oo la sifeeyay si loo siiyo khibrad cusub. Cusbooneysiinta sidoo kale waxaa ku jira saameyn dabiici ah oo saameyn ku leh dabeecadda. Cusboonaysiinta ayaa sidoo kale la filayaa inay hagaajiso khibrada isticmaale iyada oo la siinayo naqshad yar. Astaamaha kale waxaa ka mid ah shaashadda qufulka marwalba saaran iyo asalka fiidiyowga firfircoon. Shaki la'aan, terminaalku wuxuu qaadanayaa hawo aad u cusbooneysiisay mahaddeeda, laakiin iyada oo aan si aad ah loo cusbooneysiinin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » MIUI 11 wuxuu durbaba imanayaa Redmi 4 qaabkiisa xasilloon
Redmi Note 8 Pro hadda waxay ka helaysaa MIUI 11 cusbooneysiin dalal badan
Cayaaraha Epic waxay ku bilaabayaan Dagaalyahannada Dagaalyahannada bakhaarkeeda: guud ahaan aruurinta RPG ee geesiyaal